Natiijadii Golaha Wakiilada Gobolka Togdheer oo lagu Dhawaaqay iyo Xisbiyada oo ku kala Calaf qaaday. - Haldoornews | Haldoornews
Natiijadii Golaha Wakiilada Gobolka Togdheer oo lagu Dhawaaqay iyo Xisbiyada oo ku kala Calaf qaaday.
June 4, 2021 - Written by admin
Seddexda Xisbi qaran Ayaa ku kala Calaf qaaday Natiijada Golaha Wakiilada ee Gobolka Togdheer oo uu Hogaanka usido Xisbiga Wadani.
Golaha Wakiillada ee Gobolka Togdheer.
● WADDANI 7
● KULMIYE 4
● UCID 4
Sidoo kale Waxa la soo saaray natiijadii doorashadii Golaha deegaanka ee degmada Burco, waxaanay xisbiyadu u kala heleen